सृजना बस्नेतको बारेमा आयो नसोचेको रहस्य , दिदिहरुले बताए त्यो दिनको सबै नालीबेलि, अब के होला ? ( भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
सृजना बस्नेतको बारेमा आयो नसोचेको रहस्य , दिदिहरुले बताए त्यो दिनको सबै नालीबेलि, अब के होला ? ( भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki July 17, 2021
बिर्तामोड नगरपालिका – ५ स्थित पूर्व – पश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्म उत्तर २५ वर्षीय युवती सृजना वस्नेत अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन् ।सानिमाको घरमा स-परिवार बस्तै आएकी सृजना घरको आगनमा अर्धनग्न अवस्थामा मृत भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले जनाएको छ । उनी बिर्तामोडस्थित सृजनशील सहकारी संस्थामा कलेक्टरको काम गर्दै आएको बुझएको छ । घटना स्थल शिल गरेर घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय र प्रहरी बीचमा चर्काचर्की भएको छ । स्थानिय संग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला ।